कबड्डी : अब खेल्न पुग्यो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कबड्डी : अब खेल्न पुग्यो
कबड्डी–४ अर्थात् फाइनल म्याचसम्म आइपुग्दा फिल्मको अर्गानिक विशेषता, कथाको स्वाभाविकता र गति पहिलेका शृंखलाको तुलनामा कमजोर छ । अलिकति चिकन, अलिकति प्याज, गाजरका केही टुक्रा र सागका केही पात हालेर फापरको रोटीलाई बर्गर बनाएझैं लाग्छ फिल्म ।
मानिसले रचना गर्ने कलाको आधार मूलतः ऊ बाँचिरहेको समाज र समय हो । सिनेमा पनि यही समाजको प्रतिविम्ब, प्रतिक्रिया र सिर्जना हो ।
जेष्ठ २८, २०७९ रघु पन्त
सिनेमा या त जिम्मेवार हुन्छ या गैरजिम्मेवार । यदि तपाईं आफ्नो समयलाई बुझेर फिल्म बनाइरहनुभएको छ भने जिम्मेवार फिल्म बन्छ,’ प्रसिद्ध निर्देशक, कवि, गीतकार, पटकथाकार गुलजारले सन् १९९६ मा दिएको एक अन्तर्वार्ताको अंश हो यो ।
सन् १९९४ मा दिएको अर्को अन्तर्वार्तामा गुलजार फिल्मको बजार, व्यावसायिकता एवं लोकप्रिय र कलात्मक फिल्मका श्रेणीबारे भन्छन्, ‘...यो श्रेणी कसले बनायो, श्रेणीहरू तपाईंहरू बनाइरहनुभएको छ । व्यावसायिक हित त हुन्छ । सिनेमा ‘आर्ट फर लाइफ’ हो । ...यदि तपाईं ‘रिफर्म’ गरिरहनुभएको छैन भने रिकर्ड त गर्नुहोस् । कुनै पनि कलाको यो भूमिका रहनुपर्छ । अब जो फिल्मकारहरू रिकर्ड गर्न सकिरहेका छैनन्, वास्तवमा तिनीहरू फास्ट फुड बेचिरहेका छन् । त्यसैले त म भन्ने गर्छु, सिनेमा या त जिम्मेवार हुन्छ या गैरजिम्मेवार ।’
नेपाली सञ्चारमाध्यम र सिनेमा दर्शकहरूमा यतिबेला ‘कबड्डी–४’ को चर्चा छ । सिनेमाले दर्शकको ध्यान तान्न सफल भएको छ । र, व्यावसायिक रूपमा सिनेमा निर्माता, निर्देशकहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सफल भएको छ । सिनेमाको व्यावसायिक सफलतासँगै यसका विविध पक्षबारे चर्चा–परिचर्चा, प्रशंसा र आलोचना हुन थालेको छ । सिनेमाका लेखक, निर्देशक र कलाकारहरूले ती सबै प्रकाशित आलोचना र समीक्षाको गम्भीर अध्ययन पनि गर्नुपर्छ ।
किन गर्नुपर्छ ? किनभने सिनेमा निर्माण व्यावसायिक मात्रै नभइ एउटा जिम्मेवारीयुक्त र महत्त्वपूर्ण सिर्जनात्मक कर्म हो । यस्तो सिर्जनात्मक काम, जसले आफ्नो समयको, एउटा कालखण्डको अभिलेख राख्छ । गुलजारका शब्दमा भन्ने हो भने ‘रिकर्ड’ गर्न सक्छ । ‘रिफर्म’ का लागि आवाज उठाउन सक्छ, उत्प्रेरणा दिन सक्छ ।
त्यसैले गुलजारको शब्द ‘फास्ट फुड’ को यहाँ उल्लेख गर्दै भन्नुपर्छ– सिनेमा ‘फास्ट फुड’ जस्तो हुनु हुँदैन । जसलाई खाएर एकछिन पेट भर्न त सकिन्छ, तर अन्ततः त्यसले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ ।
हलिउडदेखि बलिउडसम्मै सिनेमा शृंखला अर्थात् सिक्वेल बनाउने चलन बढ्दै गएको छ । कुनै सिनेमा चल्यो भने पुरानै नाम राखेर त्यसको दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं भागसम्म बनाउने चलन देखिन थालेको छ । यो चलन नेपाली सिनेमामा पनि देखिँदै छ । ताजा उदाहरण– ‘कबड्डी–४’ । ‘कबड्डी–४’ लाई कबड्डी शृंखलाको ‘फाइनल म्याच’ भनिएको छ । कबड्डी–४ हेरेपछि दर्शकलाई पनि अनुभव हुन्छ– ‘ल अब कथा सकियो’ ।
‘कबड्डी’ को पहिलो शृंखला हेर्दा मलाई जोमसोममा बसेर स्थानीय अर्गानिक फापरको रोटी त्यहीँको तरकारी र गोलभेंडाको अचारसँग खाएझैं स्वादिलो लागेको थियो । कथावस्तु, पात्रहरूको चयन, संवाद र दृश्यांकनले एउटा स्वाद दिएको थियो । सिनेमामा खिचिएका दृश्यहरू मौलिक र मनोरम थिए । छायांकनले आँखालाई शीतल बनाएको थियो । कथा कालीगण्डकी बगेजस्तै गतिमान बगेको थियो । संवादहरू स्वादिला र चोटिला थिए । फिल्म हेरेर दर्शक हलबाहिर निस्कँदा उनीहरूले एक प्रकारको तृप्ति र आनन्द अनुभूति गरेका थिए ।
‘कबड्डी’ को दोस्रो शृंखलाले पनि पहिलोको गतिलाई पक्रेको थियो । मुस्ताङकै कोदोको ढिँडो जोमसोममा बसेर गुन्द्रुक मस्यौराको झोल र गोलभेंडाको अचारमा चोप्दै खाएझैं तिख्खर मौलिक स्वाद दोस्रोमा पनि थियो । कथाको गति, संवाद, अभिनयमा पहिलो शृंखलाकै ताजापन दोस्रोमा पनि देखिएको थियो ।
‘कबड्डी’ को तेस्रो शृंखलामा कथाको सारवस्तु केही कमजोर थियो । तर, सिनेमा अघिल्ला दुई भागको पृष्ठभूमिमा उभिएको हुनाले त्यसमा गति र दर्शकलाई उत्सुक बनाउने ठाउँ थियो । त्यही स्पेसमा तेस्रो शृंखला उभिएको थियो । काजी (दयाहाङ) को बिरक्तिएको मनलाई नायिकाका रूपमा उपासना सिंहको प्रवेशले आकर्षित गरेको थियो ।
तेस्रो शृंखलाचाहिँ भृकुटीमण्डपबाहिर फुटपाथमा बेचिने पोलेको मकैजस्तो थियो । पहाडमा फलेको मकै नुन–खुर्सानीसँग खाँदाझैं स्वाद थियो, कबड्डीको तेस्रो भाग । यही शृंखलामा कथाले नयाँ ट्वीस्ट लिएको थियो र अब के हुन्छ भन्ने उत्सुकता बाँकी छोडेको थियो । कबड्डीको जुन तिख्खर स्वाद पहिलो र दोस्रोमा थियो, तेस्रो भागसम्म आइपुग्दा त्यो केही कम भइसकेको थियो ।
कबड्डी–४ अर्थात् चौथो भागसम्म आइपुग्दा फिल्मको अर्गानिक विशेषता, कथाको स्वाभाविकता र गति पहिलेका शृंखलाको तुलनामा कमजोर भएको छ । केही चिकन, केही प्याज, केही गाजरको टुक्रा र केही सागका पात हालेर फापरको रोटीलाई बर्गर बनाएझैं लाग्छ फिल्म कतैकतै ।
तर, अघिल्ला भागको संरचनामा उभिएको कबड्डी–४ ले आफ्नो कथा, गति र स्वाभाविकता पूरै गुमाएको भने छैन । फिल्मले दर्शकलाई हेरुन्जेल बाँधेरै राख्छ । केही कमजोर दृश्यहरू भए पनि सामान्य दर्शकका लागि हेरुन्जेल फिल्म मनोरञ्जनात्मक छ ।
दर्शकलाई बाँध्ने भनेको पटकथा, संवाद र अभिनयले हो । त्यसमा संगीत र फिल्मको दृश्यांकनको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । पटकथा पहिलेको तुलनामा कसिलो र गतिमान छैन । कतिपय दृश्यले उत्सुकता जगाउँदैन, जस्तो सिनेमाको उत्तरार्द्धतिर बेहुली लिएर मोटरसाइकलमा भाग्दाको दृश्य । यो दृश्यमा सक्कली नायिका मोटरसाइकलमा छैनन् भन्ने पूर्वानुमान दर्शकले गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले मोटरसाइकलको पछिपछि बमकाजीको टोलीले बाइक कुदाएको दृश्य दर्शकलाई उत्सुक बनाउने खालको छैन ।
लाखौं वर्षदेखि मानव समाज छ । हजारौं भाषा, संस्कृति र समुदायका मानिस पृथ्वीका विभिन्न भूभागमा बस्छन् । तिनका आआफ्ना संस्कृति, धर्म, भाषा, गीत, लोकगीत, दुःख र सुखका कथा छन् । लाखौं वर्षदेखि मानिसले प्रेम गर्दै आइरहेका छन् । जबसम्म मानव समाज अस्तित्वमा रहन्छ, प्रेम पनि अस्तित्वमा रहनेछ । जबसम्म समाज रहन्छ, समाजमा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व र अन्तर्विरोधहरू पनि रहन्छन् । मानिसले रचना गर्ने कलाको आधार मूलतः ऊ बाँचिरहेको समाज र समय हो । सिनेमा पनि यही समाजको प्रतिविम्ब, प्रतिक्रिया र सिर्जना हो । समय वा बाँचिरहेको कालखण्डको कथा हो, प्रस्तुति हो ।
यस अर्थमा कबड्डीले हाम्रो समयको कथा समय चेतनाअनुसार भन्नुपर्थ्यो । त्यो भन्ने क्रममा कबड्डी–४ केही चुकेको छ । खासगरि यो सिनेमाले नारीलाई हासिल गर्ने साधनको रूपमा हेर्न खोजेको झल्को केही दृश्यमार्फत् दिन्छ ।
कबड्डीको पहिलो शृंखलाबाट सुरु भएको एकतर्फी प्रेमलाई दोस्रो शृंखलामा जसरी टुंग्याइएको छ, त्यो एकदमै स्वाभाविक, न्यायिक र उचित छ । प्रेम दोहोरो हुन्छ । साँचो मिलन दुईतर्फी सहमतिमा मात्रै हुन्छ । कसैले कसैलाई मन पराउन सक्छ, तर त्यो प्राप्तिको आधार बन्दैन यदि जसले चाहेको उसलाई अर्को पक्षले मन पराउँदैन भने । फिल्मको दोस्रो शृंखलाको अन्तिमतिर आफूले मन पराएको केटोसँग भागिरहेकी मैयाँलाई जब रोकेर आफ्नो कब्जामा काजीले लिन खोज्छ, त्यसबेला मैयाँले कडा रूपमा विद्रोह गर्छे र ‘म मरिगए पनि तँलाई स्विकार्दिन’ भन्छे । यहीँनेर काजी भावनात्मक रूपमा पराजित हुन्छ र कब्जामा आइसकेकी मैयाँलाई छोड्छ । यो दृश्यमा दयाहाङले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पात्र बाँचेका छन् । कबड्डी–कबड्डी अर्थात् दोस्रो भाग फिल्मको सारांश र समय चेतनाको अभिव्यक्ति पनि हो ।
प्रेम दुईतर्फी सहमतिको आधारमा हुर्कन्छ र अघि बढ्छ । बलजफ्ती छेकेर, कब्जा गरेर शारीरिक रूपले नियन्त्रणमा कसैलाई लिए पनि प्रेम प्राप्त गर्न सकिँदैन बरु घृणा हात लाग्छ । त्यसैले कसैले तिम्रो प्रेमलाई अस्विकार्छ भने त्यो अस्वीकारलाई स्वीकार गर भन्ने लोकतान्त्रिक चेतना र सन्देश कबड्डीको दोस्रो भागले दिन्छ । तर, यो शृंखलाले केटीलाई जुत्तासँग तुलना गरेको छ । ‘आफूले मन पराएको जुत्ता पो जुत्ता, नभए खाली खुट्टै ठीक’ भन्नेजस्ता संवाद लोकप्रिय भए पनि तिनले दिने सन्देश हो– महिलाहरू भोगका साधन हुन्, उपभोग गर्ने साधन हुन् । र, यो सन्देश महिलाद्रोही छ ।
कबड्डी र कबड्डी–कबड्डी अर्थात् पहिलो र दोस्रो शृंखलाकी नायिकाको चरित्र चित्रण सुदृढ, स्वाभाविक र सामयिक लाग्छ । त्यो तुलनामा कबड्डी–४ की नायिका शिक्षिका शान्तिको चरित्र निर्माण फितलो छ ।
कबड्डीकी सुरुकी नायिका मैयाँभन्दा पृष्ठभूमि, शिक्षा र अनुभवका आधारमा कबड्डी–४ की शान्ति स्वाभाविक रूपमै परिपक्व र दृढ देखिनुपर्थ्यो । पढे–लेखेकी र शिक्षिकासमेत रहेकी शान्ति (मिरुना मगर) आफूलाई अपहरण गरेर बलजफ्ती विवाह गर्न खोज्ने बमकाजीअघि निरीह बनेर आँसु खसालेर बस्नु स्वाभाविक लाग्दैन ।
‘म तिमीलाई मन पराउन्न, तिमीले मलाई यसरी बलजफ्त थुनेर राख्नु हुँदैन । यो कानुनी रूपमा पनि अपराध हो । म तिमीलाई आफ्नो जीवनसाथी मान्न सक्दिन’ भनेर विद्रोहका शब्द बोल्न सक्ने र बमकाजीविरुद्ध बोलीले भए पनि प्रतिरोध गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै यो स्पेसलाई ठीक ढंगले चित्रण र प्रयोग गर्न पटकथाकार, संवाद लेखक र निर्देशक चुकेका छन् । सबभन्दा नराम्ररी निर्देशक चिप्लेको र चुकेको ठाउँ नै यही दृश्य हो । शान्तिको व्यक्तित्व, उसको आत्मबल, प्रेमप्रतिको दृढता, सिनेमाको सन्देश र सामयिक चेतना प्रवाह गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर यहीँनेर थियो । कबड्डी–४ मा आफ्नो समय अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै यहाँनिर चुक्चुकाउने ढंगले लेखक–निर्देशक चुक्नु नमज्जालाग्दो छ ।
सिनेमाको अघिल्ला कडीमा झाँक्रीले लठ्याएर पेट बोकाएको तथ्यलाई निर्देशकले कसरी बिर्सेको र झाँक्रीलाई अस्वाभाविक ढंगले किन चोख्याउनुपरेको ? यो दृश्य कबड्डी–४ मा आवश्यकतै थिएन ।
यस्ता विभिन्न कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि कबड्डी–४ लाई दर्शकले मन पराएका छन् । फिल्म हिट भएको छ । अपेक्षाभन्दा बढी कमाइ गर्न सफल भएको छ । किन होला ?
किनभने यो सिनेमाका पात्रहरूसँग दर्शकहरूले अपनत्वको भाव राखेका छन् । काजी र बीके मात्रै होइन, अरू पात्र पनि हाम्रो समाजका प्रतिनिधि पात्र नै हुन् । सिनेमामा उनीहरूको उपस्थिति स्वाभाविक लाग्छ । तिनीहरू हाम्रै दैनिन्दिन जीवन वरपर देखिएझैं लाग्छ ।
काजीको एकोहोरो प्रेम असफल भएको छ, पटकपटक । त्यसैले त्यस पात्रमा अनेकौं कमजोरी भए पनि त्यसप्रति दर्शकमा सहानुभूति त कतै कतै । विगतका तीन भागमा कबड्डीका विभिन्न पात्र हेरेका दर्शकलाई ती पात्र परिचित लाग्छन् ।
कबड्डी–४ का पात्रहरूको अभिनय पनि प्रभावशाली छ । विजय बरालको चरित्र चित्रण कथामा स्वभाविक छ, त्यो पात्रमा उनी फिट देखिएका छन् । सौगात मल्ल कतैकतै नाटकीय र लाउड लाग्छन् । मिरुना मगरका लागि अभिनय देखाउने स्पेस धेरै छैन फिल्ममा । उनको अभिनय स्वभाविक छ । गीत–संगीत उपयुक्त छ ।
सिनेमा हाम्रो समयको अत्यन्तै प्रभावकारी कला माध्यम हो । यसले लाखौंलाख मानिससँग आफूलाई जोड्न, प्रभावित गर्न, रुवाउन, हँसाउन अनि उनीहरूका संवेदनालाई उद्वेलित र प्रेरित पनि सक्छ । त्यसैले यो माध्यमको प्रयोग सोची–बिचारी गर्नुपर्छ ।
प्रेम भावनात्मक रूपमा मन जितेर मात्रै गर्न सकिन्छ । प्रेम सहमति र स्वीकृतिमा मात्रै हुन्छ । असहमति र बलजफ्तीमा प्रेम फुल्दैन । आजको पुस्तालाई यो सिकाउनु जरुरी छ । कबड्डीका शृखंलाहरूले महिला हरण गर्ने, छोप्ने चलनलाई महिलामण्डित गर्न खोजेझैं देखिन्छ, यो जरुरी छैन । छोप्ने चलन अधिकार होइन, कानुनी रूपमा दण्डनीय हो भन्ने तथ्यलाई हाम्रा सिनेमाहरूले बुझाउन सक्नुपर्छ ।
प्रेम पुरुषको मात्रै अधिकारको विषय होइन । नारीहरू पनि प्रेममा पुरुषजत्तिकै अधिकार राख्छन् । प्रेम गर्ने तरिका परिवर्तन भएको छ । प्रेम सहमति, सहकार्य र समर्पणको आरम्भ हो, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको हिंसा र बलजफ्ती चल्दैन । आजको पुस्ता र समय फेरिएको छ । यो फेरिएको समयको कथा भन्नु आजको आवश्यकता हो ।
कबड्डीका चारै शृंखला व्यावसायिक रूपमा सफल भए । सिनेमा चर्चित नै रह्यो । तर, हामीलाई ‘जिम्मेवार’ र उल्लेख गर्नलायकका सिनेमा चाहिएका छन् । कबड्डीको टिमले यो आवश्यकता बिर्सनु हुँदैन ।
रामबाबु गुरुङले सुरु गरेको कबड्डी खेल कबड्डी–४ सँगै सकियो । कबड्डी–४ मा विभिन्न कमीकमजोरी छन्, तर रामबाबुमा आफ्नो परिवेशको कथा पस्किन सक्ने खुबी छ । सिनेमा निर्माण एउटा सामूहिक सिर्जनाको परिणाम हो । त्यहाँ संगीत, संवाद, सिनेमाटोग्राफी, कथा र अभिनयलगायत अरु अनेकौं पक्ष मिलाई–मिलाई माला उन्दा फूल उनेजस्तै उन्नुपर्छ, तब मात्रै राम्रो सिनेमा बन्छ ।
रामबाबुको सफलता कबड्डी–४ मै नटुंगियोस् । उपेन्द्र सुब्बा, दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, बुद्धि तामाङ, विजय बरालजस्ता साहित्य र रंगमञ्चको अनुभव भएका मानिसहरू उनको टिममा छन् । यो टिमले अझै राम्रा सिनेमा निर्माण गर्न सक्छ । त्यसको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र मिहिनेत जरुरी हुन्छ ।
नेपाली सिनेमाको मौलिक भाषा, लय र प्रस्तुति निर्माण गर्न नेपाली जनजीवनमा थुप्रै कथा छन् । त्यो खोज्ने र तिनमा फिल्म बनाउने जाँगर रामबाबुमा नमरोस्, किनभने उनी यो समयको एक सम्भावना बोकेका निर्देशक हुन् ।